Gadzirisa Apple Watch inonamira neapuro | IPhone nhau
Inguva yekutanga yaitika kwandiri, asi isu tatoona akawanda kesi dzeApple Watch dzakavharwa kuratidza apuro nekusingaperi.
Sezvazvakaitika kwandiri uye ini ndakazvigadzirisa ndisina kushandisa mhinduro yaApple - ndichizviendesa kune technical technical service-, Ndinoda kugovera mhinduro newe.
1 Chinhu chekutanga kushivirira
2 Chinhu chechipiri kumanikidza kutangazve
3 Chinhu chechitatu kudurura bhatiri
4 Chinhu chechina ndechekutsvaga yako Apple Watch
5 Chinhu chekupedzisira kuenda kuApple technical rutsigiro
Chinhu chekutanga kushivirira
Kazhinji kazhinji ndiyo yedu pachedu maonero enguva ndiyo dambudziko. Iyo Apple Watch, kunyanya iyo yekutanga chizvarwa, inogona kutora nguva yakareba kuti ivandudze uye iite kunge yakanamatira.
Ini, iyo apuro yakaonekwa pakuisa yazvino kuvandudza. Ndakaisiya ichibatanidza husiku hwese kuzasi kwayo kuti ndione kana yaingova nyaya yenguva. Asi kwakayedza uye yaive ichingo fanana, saka ndakafunga kuti kwaisave kushaya kushivirira kwangu.
Chinhu chechipiri kumanikidza kutangazve
Ini handingaedze uyu mushonga ndisina kuve nechokwadi chekutanga poindi, nekuti simba reboot uchiri kugadzirisa rinogona kuita kuti zvinhu zviwedzere.
Kuti titangezve kumanikidzwa tinofanira kumanikidza nekubata mabhatani ese eApple Watch (korona uye bhatani) kwemaminitsi gumi chete. Asi chaizvo, isu tinofanirwa kumirira kusvikira iyo skrini yaenda nhema (iro apuro rinonyangarika) uye richiwoneka zvakare Ipapo isu tinosunungura mabhatani.
Chinhu chechitatu kudurura bhatiri
Zvekare, moyo murefu. Kana mushure mekumanikidza kutangazve (iwe unogona kuyedza kanoverengeka kana uchida), haina kuratidza chero chinhu kunze kweapuro, Tinofanira kuisiya patafura uye rega iite download.
Ziva: Ini handina kuona izvi chero kupi, asi zvakandishandira nenzira iyoyo, uye ndiwo maitiro andinokuudza. Vanhu vane hanya zvakanyanya nezve bhatiri kutarisirwa nguva pfupi yadarika, uye kunyangwe hazvo zvakanaka kuzviita kamwe chete, kuburitsa zvachose bhatiriyamu bhatiri hazvikurudzirwe. Zvirinani ndizvo zvavanotaura.
Ichauya nguva yekuti kumanikidza kutangazve hakutangise (chimwe chinhu chinoshamisa, nekuti, sekureva kwezita, rinomanikidzwa). Asi, icharatidza iyo nyoka inoratidza kuti iwe unofanirwa kuisa iyo Apple Watch kuchaja. Teerera kwaari, chiise kutakura uye enda kunhanho yechina.
Chinhu chechina ndechekutsvaga yako Apple Watch
Enda kune "Tsvaga Yangu iPhone" app (izvozvi zvinongodaidzwa kuti "Tsvaga") kubva kune yako iPhone uye sarudza iyo Apple Watch. Ehezve, iyo inokuudza iwe kuti yakashaikwa. Dhinda "Zivisa kana wawanikwa" uye "Ridza mutsindo."
Uye zvino zvakare, kutsungirira. Kana iyo Apple Watch ikavhurwa (iwe uchaona kuti ino nguva kana ikashanduka zvakanaka), ichairidza ruzha uye, nekuwedzera, inozivisa iyo iPhone kuti yawanikwa.
Ita shuwa kuti iPhone iri padyo neApple Watch kuitira kuti Apple Watch ive neinternet kubatana.
Chinhu chekupedzisira kuenda kuApple technical rutsigiro
Kana zvese zvimwe zvikatadza, danho rechishanu kuenda kuna Apple technical technical. Yangu Apple Watch inopfuura makore maviri ekuberekwa (uye ndarasa tikiti), saka chero zvakadaro iyo garandi haingavhara iyo kwandiri. Ehezve, kana iwe uine icho pasi pewarandi, danho rechishanu iri chichava chekutanga kuita. Yakagadziriswa iwewo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekugadzirisa iyo Apple Watch iyo inotonhora inoratidza iyo Apple apple
Mazuva mashoma apfuura ndakamanikidza kutangazve uye ndipo paive pakagadzikwa apuro, yaive kekutanga zvakaitika kwandiri uye ndave - tarisa kubva pazuva rekutanga parakatengeswa kuSpain, zvisinei, kumanikidza kutangazve yagadziriswa, inofanirwa kunge iri imwe bhagi yedzidziso yekupedzisira
Nacho Aragonese akadaro
Mhoro Ricky! Sezvo ndakazvitsikisa, vazhinji vakafona kwandiri vachiti naivowo. Saka hongu, zvinoita sekunge zvine chekuita neyekupedzisira vhezheni yeWOSOS. Ndinovimba kuti kune izvo zvinoitika, izvi zvinovabatsira.
Pindura kuna Nacho Aragonés
Zvakare kumanikidza kutangazve zvakare kwakagadziriswa, zvinofanirwa kunge kuri kukundikana kweshanduro yekupedzisira
Pindura kuna alexriv
alex zeuss akadaro
Ini ndinobatana nerondedzero yevakakanganiswa nenjodzi mushure mekuvandudza kune yazvino software vhezheni ... zvisinei, kure nekugadziriswa, mune yangu zvichiri kuitika pese pandinobatidza wachi. Ndinovimba Apple ichagadzirisa dambudziko iri munguva pfupi ine chigamba.
Pindura kuna Alex Zeuss
Izvo zvinoitika kwandiri. Ini ndasarudza kusarega ichidzima, nguva yekupedzisira yakanditorera zvakawanda kutanga. Ndinovimba munguva pfupi vanozozvigadzirisa.
John Gomez akadaro
Iwe unogona zvakare kusunungura iyo iPhone seyokupedzisira sarudzo, inoshanda, dambudziko nderekuti inononoka uye inguva yekuvabatanidza zvakare.
Pindura Juan Gomez
Zviri kuitika mumamodeli ese? Izvo zviri kuitika kwandiri mune maviri Apple Watch akateedzana 0 uye akateedzana 1 yehama. Mune akateedzana 3 zviri kuitika here?
Kumba isu tine akateedzana 1 uye akateedzana 3, uye zvinoitikawo kwatiri. Ini ndinofunga ndipo chete kana isu tikachiisa kuti chibhadhare uye ipapo hachimbobvi mublock.
chinhu chakafanana chinoitika kwandiri zvakare. Ini ndinowanzo dzima uye pese pandinodzishandura pariri rinorembera uye ndinofanira kuita reboot. Izvi zvakaitika kwandiri kubvira pandakagadzirisa kune yazvino vhezheni.
Pindura kuna vin
Unoziva here kuti rinotevera rinobuda rinobuda? Ndine akateedzana 3 uye izvi zvinoitika kwandiri mushure mekupedzisira kugadzirisa ..
Pindura Juan Antonio
Chinhu chimwe chete ichocho chiri kuitika kwandiri ... Kana ichitorwa pasi ini ndinowanzoisa kuti itakure paBelkin stand asi ine yazvino vhezheni yesoftware inochengeta apuro. Kana ndikachiisa kuti chachaja nechaja yePadad inochinjika otomatiki uye apuro rinonyangarika
Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika kwandiri nemwanakomana wangu, nemaviri 2mm Yekuona akateedzana 42s. Ndakaonana neApple Care (ivo vachiri pasi pewarandi) uye vakandirongera musangano weApple Store. Pandakavatora ivo vaikanganisa uye, zvingangoitika, ini ndakarekodha vhidhiyo ine timer kuitira kuti iwe uone kuti dambudziko raive rei. Mushure memazuva akati wandei vakandiudza kuti ndivatore. Vakavatambidza kwandiri vachiti ivo vaive vadzorerazve sisitimu nenzira yakadzama kupfuura zvandaive ndakwanisa kuita. Masikati mamwe chete iwayo dambudziko rakadzoka. Ndakavatora ndokudzoka uye mushure memazuva mashoma vakandiudza zvakare kuti ndivatore. Ivo vakagadzirisa zvakare yemwanakomana wangu uye vakatsiva yangu newumwe uye tiripo. Yangu ine vhezheni yapfuura, 4.2.3 (uye ini handironge kuimutsiridza, hongu). Ini zvakare ndinofunga kuti idambudziko software uye ndinofunga kuti parizvino, Apple inofanira kunge yatove kuziva zviri kuitika uye kuzivisa vashandisi kuti vatisimbise kana kuzivisa chirongwa sezvakaitwa nemamwe madhivhisi pane dzimwe nguva. Kwaziso uye moyo murefu (ndeupi mushonga)
Izvo zvaive zvaitikawo kwandiri uye kuita reset zvakare ndakadzokera kune imwecheteyo poindi. Akanga atoita bvunzo dzinoverengeka uye hapana. Ini ndinofunga danho rekutora rave nhamba yechina, pakumisikidza «Tsvaga wachi yeapuro» pane iphone, uye kundiudza kana yawanikwa. Anenge maminetsi matatu gare gare ndakanzwa ruzha, ndakadzvanya bhatani rekugamuchira ndokubva rashanda zvekare sepakutanga.
Wow, zororo rakadii. WAITA HAKO.
Carlos Salas - Cordoba - Argentina akadaro
Yakanaka sarudzo "yekutsvaga iyo IPHONE" kuti iite chizvarwa changu chekutanga Apple ichenjerere kunze kwemaapuro maitiro kwemazuva maviri. Ndatenda zvikuru nemupiro wakanaka wakadai.
Pindura Carlos Salas - Cordoba- Argentina
Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu, zvaindibatsira kwazvo, ndanga ndichishandisa wachi yangu yeapuro muapuro modhi kwemazuva matatu ... ndakafunga kuti ndanga ndarasa. Ndakaitangazve kanoverengeka uye chinhu chekupedzisira chaive kutsvaga wachi yeapuro uye mushure memaminetsi mashoma yakatanga zvakare. Chaizvoizvo ndinokutendai zvikuru.
Ndatenda kwazvo, nesarudzo "Tsvaga" yakagadziriswa mumasekondi mashoma.
Zvave zvakanaka! Ini ndatevera tsoka dzako uye ndoda kusashivirira ndakabudirira!
Jose San Martin akadaro
Ndakaedza zvese hunyengeri, asi hapana chakandishandira.
Ini handichina Apple Watch - Series 1 - yakabatana neiyo iPhone saka handikwanise kuita nhanho yechina, pane chero munhu anoziva chero imwe nzira, achidzivisa kuitora kune technical technical kana zvichibvira? (inodhura kutenderera € 4)
Pindura kuna Jose San Martín
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, handisisina chakabatanidzwa uye hapana nzira yekuchisimudza, apuro rinoramba riri …… .. Pane chero munhu anoziva kudzoreredza kubatana pa iphone kuti aite nhanho yechina?
Mhoro! Ndine yechipiri chizvarwa cheapuro wachi, yanga ichitonhora pandinorovedza muviri, matambudziko neBluetooth uye kuidzima "yakanamirwa" paapuro, ini ndaifanirwa kusasana uye kuisazve nefoni yangu. Izvi zvinogadziriswa izvozvi.
NADIR KACI akadaro
zvakanaka, yangu nhevedzano 1, pandinoiisa kubhadharisa, apuro rinowoneka uye rinonyangarika richienderera mberi asi haribhadharise kana kubatidza, kanobatsira zvishoma ndapota, ndatenda.
Pindura NADIR KACI
Apple inomira kusaina iOS 11.2.6, hatichakwanise kudzikisira iOS 11.3
Spotify chiitiko chaApril 24 muNew York